Home News Xisbiga Cusub Ee Midowga Nabadda Iyo Horumarka Muxuu Ka Badali Karaa Siyaasada...
Xisbiga Cusub Ee Midowga Nabadda Iyo Horumarka Muxuu Ka Badali Karaa Siyaasada Galaangal Intee La’eg Ayuuna Yeelan karaa?
Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday Munaasabad lagu daah furayo Xisbiga cusub ee Midowga Nabadda iyo Horumarka oo uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Xafladda ayaa waxaa kasoo qeybgalay boqolaal dad ah oo ka kala yimid magaalada Muqdisho, waxaana ka mida tobanaan xildhibaan oo ka tirsanaa kooxdii Qabyo iyo Xisbiga Daljir, iyadoo hoolka ay ay camireen xubnaha xisbigii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh.
Xafladdaan ayaa waxaa Maanta ka qeybgalay ku dhawaad 2 Kun oo qof kuwaas oo isugu jiray XIldhibaano, Siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Durba waxaa dalka Soomaaliya ka bilowday hadal heyn ku aadan Xisbigaan cusub ee Xasan Shiikh Maxamuud hoggamiyaha u yahay.
Inta badan dadka Muqdisho ayaa Maanta hadal hayo Xisbiga maanta Xasan Shiikh Maxamuud loogu caleymo saaray inuu hoggaamiye u noqdo.
Meelaha lagu Falanqeeyo siyaasadda ee Magaalada Muqdisho ayaa Maanta si weyn looga hadal hayey Xisbigaan oo ay dadka qaar ku tilmaameyn inuu yahay mid adag oo tartan culus ka geli doono Dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigeeda uga dhiman yahay muddo laba sano ah.
Sidoo kale dadka qaar ayaa aaminsan inuu xisbigaan yeelan doonin wax saameyn ah maadaama uu madax u yahay Madaxwyenihii hore ee Xasan Shiikh kaasoo ku fashilmay tartankii uu Farmaajo la galay.
Muqtaar Maxamed Cali oo ah siyaasi ku takhasusay arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa MOL u sheegay in Xisbigaan cusub uu u baahan yahay siyaasad adag si uu ugu guuleysto doorashada soo socoto maadaama uu sheegay inay jiraan Siyaasiyiin kale oo adag oo xisbiyo sameystay.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dalka Soomaaliya madaxweyne ka aha Afar sano, wuxuuna waqtiga uu xilka hayey la kulmayey eedeymo badan oo ku aadan inay dhaceyn musuq maasuqyo waaweyn oo aan horey Soomaaliya looga arag.
Previous articleXildhibaan Qiray Iney Fashilantay Xukuumada Kheyre
Next articleDowladda Federaalka ah oo gebi ahaanba ka hortimid musharaxnimada Mukhtaar Roobw (War Saxaafadeed)
Nabadoonkii Diiday in Waceeysle ka Tanasulo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Dil ka...
Suldaan Shariif”Farmaajo ayaa Lafta-gareen ku qanciyay ka aamusida Muqtaar Rooboow waana...